पहिलो चरणका नेता दोस्रो चरणमा कहाँ खटिँदै ? - Naya Patrika
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन आइतबार सम्पन्न भएपछि ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका नेताहरू फुर्सदिला भएका छन् । विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकालाई ती दलले दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा खटाउने तयारी गरेका छन् । तीनवटै दलले उनीहरूकै रोजाइमा जिल्ला–जिल्लामा आ–आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारमा पठाउन लागेका हुन् ।
ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका एमाले सचिव योगेश भट्टराई मंगलबार तेह्रथुमको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै छन् । त्यसपछि उनी झापा र मोरङका सभामा सहभागी हुनेछन् । वाम गठबन्धनको प्रचारलाई व्यवस्थित बनाउने उनले बताए ।
नुवाकोट १ र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव लडेका कांग्रेस नेताहरू डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी चुनावी धपेडीपछि आराममा छन् । जिल्लाको अनुरोधअनुसार प्रचारमा खटिने उनीहरूले बताए ।
पाँचथरबाट उम्मेदवार बनेका नेता भीष्मराज आङदेम्बे निर्वाचन सकिएलगत्तै सोमबार झापाको चुनावी सभामा सहभागी भए । ‘जिल्लामा चुनाव सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री, रामचन्द्र दाइसहितका नेता सहभागी भएको झापाको सभामा सहभागी भएँ,’ आङदेम्बेले भने, ‘दुई दिन जिल्लामा बस्छु । त्यसपछि इलाम, मोरङ, धनकुटासहितका जिल्लामा हुने चुनावी प्रचारमा सक्रिय बन्छु ।’
हुम्ला प्रदेश सभा (ख) बाट उम्मेदवार बनेका जीवनबहादुर शाही सोमबार जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट आइपुगे । हिमाली जिल्लामा चुनावी प्रचारका क्रममा भएको दौडधुपले थाकेको भन्दै आफू केही दिन आराम गर्ने सोचमा रहेको उनले बताए । ‘हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने ठाउँमा समेत चुनावी प्रचारमा जाँदा थाकिएको छ । जिउ भरिनै दुई महिना लाग्ला जस्तो भएको छ,’ शाहीले भने, ‘एकपटक काठमाडौं आएर मतगणनाका लागि पुनः जिल्ला फर्किने तयारीमा छु ।’ पार्टीले खटाए जिल्लातिर जाने उनको भनाइ छ ।
जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार भएका शक्ति बस्नेत सबै मतपेटिका सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राखिसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा खटिनेछन् । धेरै ठाउँबाट चुनावी सभाका लागि आग्रह गरेकाले मंगलबार बेलुका कार्यतालिका बनाई चुनावी सभामा सहभागी हुने उनले बताए । बस्नेत प्रदेश नम्बर ५ र ६ पर्ने जिल्लाका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘आगामी दिनमा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा स्थानीय पार्टी नेता– कार्यकर्तासँग सल्लाह गरेर कार्यतालिका बनाई खटिन्छु ।’